Gal Gadot ရဲ့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဝတ်စုံလေးများ
20 Jul 2018 . 4:23 PM
ပုရိသတွေအားလုံးသာမက မိန်းကလေးတွေပါ မချစ်ဘဲမနေနိုင်လောက်အောင် အပြုံးချိုချိုနဲ့ ဆွဲဆောင်တတ်လွန်းတာကတော့ ပရိသတ်အားလုံးရဲ့ Wonder Woman ကြီး Gal Gadot ပါပဲ။ သူမရဲ့ အပြုံးတချက်နဲ့တင် ကြွေဆင်းသွားကြရတဲ့ သူတွေကြောင့် Gal Gadot ဟာ Wonder Woman ရုပ်ရှင်တစ်ကားတည်းနဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရခဲ့သူပါ။
ဒါ့အပြင် Press Show တွေထက်မှာ၊ Red Carpet တွေပေါ်မှာ လင်းလက်တောက်ပနေတတ်တဲ့သူမဟာ Fashion ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း အမြဲတမ်းလုံလုံခြုံခြုံဝတ်ဆင်တတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။
Mini Dress လေးတွေ၊ Maxi Dress လေးတွေနဲ့ အမြဲတမ်းရွှင်လန်းတက်ကြွနေတတ်သူ Gal ရဲ့ Fashion လေးတွေက မြန်မာမိန်းကလေးတွေနဲ့လည်း လိုက်ဖက်လှတာမို့ Monochrome ဆန်ဆန် တစ်ရောင်တည်း Fashion လေးတွေဝတ်လေ့ရှိသူ၊ အနီရောင်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲကြိုက်လွန်းလှသူ Gal ရဲ့ အမိုက်စား Fashion လေးတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Wonder Woman Premiere Night မှာ အနီရဲရဲ တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ Givenchy Dress လေးနဲ့ Gal Gadot ဟာ အများကြားထဲမှာ ထင်းလင်းနေခဲ့ပါတယ်။
Gal အနီကြိုက်ပုံကတော့ ငြင်းမရအောင်ပါပဲ။ ပွဲတိုင်းနီးပါး အနီရဲရဲ ကိုသာရွေးချယ်တတ်တဲ့ Gal ကို Vshape A-Line Dress လေးနဲ့ Batman Vs Superman:Dawn of Justic London Premiere ပွဲမှာ တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Variety’s Power of Women Event မှာ Gal ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ Fashion လေးကရော? သေချာပေါက် အနီရောင် အဖျားတွန့် Dress လေးနဲ့ ကျော့ရှင်းနေတာပါပဲ။
အရပ်ရှည်ရှည် ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့ Gal ဟာ ပုရိသတွေအတွက်တော့ အိပ်မက်ထဲက တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ နတ်သမီးတပါးလိုအလှမျိုးပိုင်ထားတယ်ဆိုတာ ဒီငွေရောင် Dress လေးက ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။
ကလေးမိခင်ဖြစ်နေတာတောင် ပန်းရောင် Dress လေးဝတ်ထားတဲ့ Gal အလှကတော့ အပျိုဖြန်းလေးလိုပါပဲ။
အနက်ရောင်ကတော့ ဘယ်သူဝတ်ဝတ်ကို ကျော့ရှင်းလှပနေစေတာပါ။ ဒါပေမယ့် Gal Gadot ကတော့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ အလှမျိုးနဲ့ မြင်သူ ရင်ဖိုစေမှာပါ။
New York မြို့ရဲ့လမ်းမတွေထက်က အဖြူရောင်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ကြည့်သူရင်အေးစေမယ့် အလှပါပဲ။
အမြဲတမ်း တစ်ရောင်တည်း Fashion လေးတွေကိုသာဝတ်ဆင်တတ်တဲ့ Gal ရဲ့ ဒီတခါ Blue Dress လေးကတော့ ပုရိသတွေရင်အေးစေမှာပါ။
အဝါရောင်ဝတ်ခဲတဲ့ Gal ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး အဝါရောင် Fashion ပါ။
ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ mini dress လေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြုံးနေတဲ့ Gal Gadot ကို ခုလိုပဲ လူငယ်ဆန်ဆန်လေးလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အမြဲလှနေပြုံးနေတတ်သူ မင်းသမီးချော Gal Gadot ရဲ့ Fashion Taste ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်လို အရောင်လေးကို ဘယ်လိုပုံစံလေးတွဲဖက်ဝတ်ဆင်လို့ရမလဲ လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
Gal Gadot ရဲ့တညျငွိမျရငျ့ကကျြ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးဝတျစုံလေးမြား
ပုရိသတှအေားလုံးသာမက မိနျးကလေးတှပေါ မခဈြဘဲမနနေိုငျလောကျအောငျ အပွုံးခြိုခြိုနဲ့ ဆှဲဆောငျတတျလှနျးတာကတော့ ပရိသတျအားလုံးရဲ့ Wonder Woman ကွီး Gal Gadot ပါပဲ။ သူမရဲ့ အပွုံးတခကျြနဲ့တငျ ကွှဆေငျးသှားကွရတဲ့ သူတှကွေောငျ့ Gal Gadot ဟာ Wonder Woman ရုပျရှငျတဈကားတညျးနဲ့ ပရိသတျအခိုငျအမာရခဲ့သူပါ။
ဒါ့အပွငျ Press Show တှထေကျမှာ၊ Red Carpet တှပေျေါမှာ လငျးလကျတောကျပနတေတျတဲ့သူမဟာ Fashion ပိုငျးနဲ့ပတျသကျရငျလညျး အမွဲတမျးလုံလုံခွုံခွုံဝတျဆငျတတျတာ တှရေ့ပါတယျ။
Mini Dress လေးတှေ၊ Maxi Dress လေးတှနေဲ့ အမွဲတမျးရှငျလနျးတကျကွှနတေတျသူ Gal ရဲ့ Fashion လေးတှကေ မွနျမာမိနျးကလေးတှနေဲ့လညျး လိုကျဖကျလှတာမို့ Monochrome ဆနျဆနျ တဈရောငျတညျး Fashion လေးတှဝေတျလရှေိ့သူ၊ အနီရောငျကို စှဲစှဲမွဲမွဲကွိုကျလှနျးလှသူ Gal ရဲ့ အမိုကျစား Fashion လေးတှကေို တငျပွပေးလိုကျရပါတယျ။
Wonder Woman Premiere Night မှာ အနီရဲရဲ တလကျလကျတောကျပနတေဲ့ Givenchy Dress လေးနဲ့ Gal Gadot ဟာ အမြားကွားထဲမှာ ထငျးလငျးနခေဲ့ပါတယျ။
Gal အနီကွိုကျပုံကတော့ ငွငျးမရအောငျပါပဲ။ ပှဲတိုငျးနီးပါး အနီရဲရဲ ကိုသာရှေးခယျြတတျတဲ့ Gal ကို Vshape A-Line Dress လေးနဲ့ Batman Vs Superman:Dawn of Justic London Premiere ပှဲမှာ တှရေ့တာဖွဈပါတယျ။
Variety’s Power of Women Event မှာ Gal ဝတျဆငျထားတဲ့ Fashion လေးကရော? သခြောပေါကျ အနီရောငျ အဖြားတှနျ့ Dress လေးနဲ့ ကြော့ရှငျးနတောပါပဲ။
အရပျရှညျရှညျ ဒေါငျကောငျးကောငျးနဲ့ Gal ဟာ ပုရိသတှအေတှကျတော့ အိပျမကျထဲက တလကျလကျတောကျပနတေဲ့ နတျသမီးတပါးလိုအလှမြိုးပိုငျထားတယျဆိုတာ ဒီငှရေောငျ Dress လေးက ဖျောပွပေးနပေါတယျ။
ကလေးမိခငျဖွဈနတောတောငျ ပနျးရောငျ Dress လေးဝတျထားတဲ့ Gal အလှကတော့ အပြိုဖွနျးလေးလိုပါပဲ။
အနကျရောငျကတော့ ဘယျသူဝတျဝတျကို ကြော့ရှငျးလှပနစေတောပါ။ ဒါပမေယျ့ Gal Gadot ကတော့ ရငျ့ကကျြတညျငွိမျတဲ့ အလှမြိုးနဲ့ မွငျသူ ရငျဖိုစမှောပါ။
New York မွို့ရဲ့လမျးမတှထေကျက အဖွူရောငျရှငျးရှငျးလေးနဲ့ ကွညျ့သူရငျအေးစမေယျ့ အလှပါပဲ။
အမွဲတမျး တဈရောငျတညျး Fashion လေးတှကေိုသာဝတျဆငျတတျတဲ့ Gal ရဲ့ ဒီတခါ Blue Dress လေးကတော့ ပုရိသတှရေငျအေးစမှောပါ။
အဝါရောငျဝတျခဲတဲ့ Gal ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး အဝါရောငျ Fashion ပါ။
ပနျးရောငျဖြော့ဖြော့ mini dress လေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပွုံးနတေဲ့ Gal Gadot ကို ခုလိုပဲ လူငယျဆနျဆနျလေးလညျး တှရေ့ပါတယျ။
ဒီလောကျဆို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ အမွဲလှနပွေုံးနတေတျသူ မငျးသမီးခြော Gal Gadot ရဲ့ Fashion Taste ကိုကွညျ့ပွီး ဘယျလို အရောငျလေးကို ဘယျလိုပုံစံလေးတှဲဖကျဝတျဆငျလို့ရမလဲ လလေ့ာနိုငျပါပွီ။